Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo geeriyooday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo geeriyooday
April 20, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Marxuum Cabdirashiid Maxamed Xirsi. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa saakay oo Sabti ah ku geeriyooday magaalada Garoowe, sida eheladiisa iyo ilo-wareedyo katirsan baarlamaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Cabdirashiid ayaa maalmihii u dambeeyay xanuunsanayay, sida ilo-wareedyadu sheegeen.
Waxa uu soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka Puntland intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2013.
Sidoo kale Cabdirashiid ayaa soo qabtay wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka iyo wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda xilligii maamulkii Cabdiweli Maxamed Cali.
Garoowe-(Puntland Mirror) Soo xulista ku saleysan qaab-beeleedka ee baarlamaanka cusub ee Puntland ayaa socota, sida ay sheegeen guddiga xalinta khilaafaadka. Beelo badan ayaa soo xulay xubnihii umatali lahaa baarlamaanka soo socda ee Puntland, balse weli [...]